Enkulumweni yanamuhla iMac mini entsha eneprosesa le-M1 | Ngivela kwa-mac
Enkulumweni yanamuhla iMac mini entsha eneprosesa le-M1 lingena ngaphakathi
Kwisethulo se-Apple esisanda kuphela, idivayisi ebesingayilindelanga iye "yasakazwa". Kwakudaluliwe ukuthi ama-Macs okuqala enkathi entsha ye-Apple Silicon ngokuqinisekile azoba yi-MacBook ethile, mhlawumbe neMac entsha enedizayini entsha, kepha akekho noyedwa owayekhulume nge Mac mini.
Yebo, sesivele sinayo iM mini mini ethokozisayo nge Iprosesa ye-M1, ngokusebenza okuhle kakhulu, nangaphezulu kwama-Euro ayikhulu kushibhile kunemodeli ekhona kuze kube namuhla. Futhi ngaphezulu kwalokho sekuvele kutholakala ngokulethwa ngesonto elizayo. Ngaphandle kokungabaza, sisenhlanhleni. Ake sibone izici zale divayisi entsha.
IMac mini entsha kanye ne Iprosesa ye-M1 ngaphandle kokungabaza basimangazile sonke esilandele umcimbi «Into eyodwa»Lokho kuphele isikhashana esedlule. Ngokuqinisekile i-Apple inganeliseka ngethimba elisebenza kuphrojekthi ye-Apple Silicon ngemfihlo yalo.
Sebevele basimangaza embhalweni oyisihluthulelo kaJuni WWDC ngokusikhombisa ukuthi iphrojekthi ye-Apple Silicon isihambele phambili kangakanani, cishe cishe akukho okwakwaziwayo kuze kube yileso sethulo. Futhi manje, lapho sichithe izinsuku siqagela ngeprosesa engekho A14X, I-Apple yethula i-chip yayo entsha ye-M1, iphinde yafakwa kwi-Mac mini ebesingazi ukuthi izokwakhiwa kanjani.
Ukucaciswa kobuchwepheshe be-Mac mini Apple Silicon entsha
I-Apple Silicon yonke ngentengo enhle kakhulu.
Nakhu imodeli eyisisekelo ye-Mac mini entsha isinikeza:
I-Apple M1 chip ene-8-core CPU, i-8-core GPU ne-16-core Neural Engine
Inkumbulo ehlanganisiwe engu-8GB
Isitoreji se-256GB SSD
Isivele itholakala ku-Apple Web Store ngenani elilungiswe kakhulu: I-799 Euros. Ngaphandle kwalokho, kunokunye ukucushwa okubiza kakhulu kwama-1.029 Euro ahluka kuphela kumthamo wesitoreji se-SSD, esisuka ku-256 GB siye ku-512.
Kokubili ukucushwa unenketho yokwandisa i-RAM iye ku-16 GB, kanye ne-SSD kuze kufike ku-2 TB. Usungavele uyi-ode kufayela le- web I-Apple Store, nokulethwa kuhlelelwe umhla ka- evikini elizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » Enkulumweni yanamuhla iMac mini entsha eneprosesa le-M1 lingena ngaphakathi
IMacBook Pro ene-Apple Silicon M1 nempilo yebhethri engajwayelekile
IMacBook Air entsha eneprosesa ye-M1 ibe ngeyokuqala ukwethulwa namuhla